दोषै दिने हो भने डा. केसीलाई हाेइन, माथेमा आयोगका सबै सदस्यलाई दिनुपर्छ – Health Post Nepal
दोषै दिने हो भने डा. केसीलाई हाेइन, माथेमा आयोगका सबै सदस्यलाई दिनुपर्छ
२०७५ माघ १४ गते १६:२५
चिकित्साशिक्षासम्बन्धी त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले १४ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि यो अभियान एउटा नयाँ बहसमा प्रवेश गरेको छ । त्यही माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टेकेर कानुन बनाउने विषयमा सरकारले पटक–पटक प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले त्यसलाई पन्छाएरै विधेयक पारित गरेको छ । यस विषयमा कार्यदलका विज्ञ डा. मदन उपाध्यायसँग पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानी :
डा. केसी आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ । यहीबीचमा सरकारले जबर्जस्ती चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
शक्तिशाली सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको हुँदा अरूजस्तै मलाई पनि दुःख लागेको छ । के कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने सिलसिलामा ९५ प्रतिशत भयो होला, तर ५ प्रतिशतमा आएर अड्किएको छ । त्यो भनेको एउटा मेडिकल कलेजले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्ने हो । कार्यदलभित्र छलफलका दौरान हामीले एउटा विश्वविद्यालयले ३ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भनेका थियौँ । अहिले त्रिविको डिनदेखि सबैले भन्ने गरेका छन् कि, हामी ३ वटाभन्दा बढीलाई दिन सक्दैनौँ । प्राकृतिक हिसाबले विश्वविद्यालयले आफैँ क्षमता बढाउनुपर्यो ।
म ४० वर्षदेखि मेडिकल शिक्षामा भएको हुनाले यी सबै कुरा भन्दै छु । यतिवेला परीक्षा नै ढिला भइसक्यो होइन र ? १२ वर्षको बेसिक, अनि मेडिकल पढाइ सकेर काउन्सिलको परीक्षा दिँदा ३० प्रतिशत मात्र पास भएको छ । यति मिहिनेत भइसकेपछि ९५ प्रतिशत सफल हुनपर्नेमा ३० प्रतिशत मात्र छ । त्यसकारण विद्यार्थीको शिक्षा राम्रो भएको छैन भन्ने प्रमाणित छ । यसमा धेरै वादविवाद गर्नु आवश्यक छैन ।
पूर्वकुलपतिहरू पनि भनिरहेका छन्, राजनीतिक दबाबमा हामीले सम्बन्धन दिनुपर्यो र क्षमताभन्दा बाहिर गयो । अहिले त्रिवि र केयूको क्षमताले तीनवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेज धान्नै सक्दैनन् । सम्बन्धन एकपटक लिएर मात्रै हुन्न, यो त पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिने विषय हो ।
उहाँहरू भन्नुहुन्छ, हामीलाई पोलिटिकल प्रेसर पर्यो । पर्यो पनि होला, उहाँहरूको क्षमताभन्दा बाहिर गयो । त्रिविदेखि केयूसम्म कसैले पनि ३ वटाभन्दा बढी सम्बन्धन दिन सक्दैनन्, क्षमता नै छैन । कुनै पनि कुराको एप्लिकेसन दिनु वा लिनु भनेको जिम्मेवारी लिनु पो हो त । उनीहरूको पाठ्यक्रममा कस्तो व्यवस्था छ, त्यहाँको विद्यार्थीले सिक्ने मौका पाएको छ वा छैन, त्यो त परीक्षाले देखाइहाल्छ नि !
मेडिकल साइन्स भनेको नलेजको मात्र विषय नभएर सीपको पनि परीक्षा लिन थालियो भने यो पास प्रतिशत घटेर १५ मा आउँछ । राम्रो डाक्टर हुनका लागि त बिरामीसँगको कन्ट्याक्ट हुनपर्यो । एक्सपोजर हुनपर्यो । त्यो स्केलको कुनै भाव नै छैन । चिकित्साशिक्षा धरासायी भएको छ । मेडिकल काउन्सिलमा गरिब नतिजा आउनुको कारण शिक्षा राम्रो नहुनु हो । मेडिकल कलेलहरूले जुन पैसाको भरमा भर्ना लिने गरिरहेका छन्, तिनीहरूको भने हालत खराब छ जस्तो लाग्छ । मेडिकल कलेजका डाक्टरहरू बाहिर परीक्षाका लागि जाँदा बेसिक नलेज नभेटेको इतिहास छ । उनीहरूले यत्तिकै पास गर्दिन्छन् । अहिले आएजस्तो चिकित्साशिक्षा विधेयक आयो भने चिकित्साशिक्षा झन् धरासायी हुने निश्चित छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी कुनै हालतमा सम्बन्धन दिनुहुँदैन । अब दिने कुनै पनि विश्वविद्यालले ३ वटाभन्दा बढी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मानिसले यसको विरोध गरिरहेका छन्, त्यसका सन्दर्भमा म के भन्छु भने टेक्निकल्ली ५ भन्दा बढी दिनुहुँदैन र धान्न सक्दैनन् । पूर्वाधार पुर्याएकालाई यो मनसाय लिएका वा पूर्वाधार पूरा गरिसकेका वा उपत्यकाबाहिर भनेर जस्तोसुकै तर्क गरेर यो नियम लागू हुनेछैन भन्यो भने त बाटो खुल्यो । ढोका अलिकति खुला राखेपछि हावा आयो भने त सबै खुल्छ नि त, हैन र ?
सांसदहरू पनि विज्ञ नै त होइनन् नि ! त्यसकारण उहाँहरूले कहाँ यस्तो हुन्छ, संसद् वा सांसदको सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गर्नुभएको हो । त्यसकारण डा. केसीलाई दोष दिनु आवश्यक छैन । दोष दिने हो भने माथेमा आयोगका सबै सदस्यलाई दोष दिनुपर्छ । भन्छन्, डा. केसी यो हो, त्यो हो, त्यस्तो होइन । माथेमा आयोगलाई उहाँको दृष्टिले राम्रो देख्यो र त्यसैलाई अघि बढायो । त्यसकारण ५ वटा कलेजको पछि लाग्न हुँदैन ।
माथेमा प्रतिवेदनको सुझाबअनुसार नै विधेयक आएको छ भनेर सत्तापक्षले भनिरहेको छ । त्यो विषय सत्य हो ?
अहिले आएका विषयहरू डा. केसीका सुरुदेखिका माग होइनन् । माथेमा आयोगले दिएको सुझाब उहाँलाई राम्रो लाग्यो र त्यसलाई स्वामित्व लिनुभयो । किनभने, उहाँले बुझ्नुभयो कि त्यो आयोगअनुसार विधेयक आयो भने नेपालमा चिकित्साशिक्षामा धेरै सुधार आउँछ । मलाई लाग्दैन कि उहाँले फलानो–फलानो ठाउँमा कलेज खोल्नुपर्छ भनेर दिएका सबै सुझाब मात्र भन्दा पनि डा. केसीका माग विज्ञहरू बनेर बसेको प्रतिवेदनलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनुहुँदैन भन्ने हो ।
सांसदहरू पनि विज्ञ नै त होइनन् नि ! त्यसकारण उहाँहरूले कहाँ यस्तो हुन्छ, संसद् वा सांसदको सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गर्नुभएको हो । त्यसकारण डा. केसीलाई दोष दिनु आवश्यक छैन । दोष दिने हो भने माथेमा आयोगका सबै सदस्यलाई दोष दिनुपर्छ ।
भन्छन्, डा. केसी यो हो, त्यो हो, त्यस्तो होइन । माथेमा आयोगलाई उहाँको दृष्टिले राम्रो देख्यो र त्यसैलाई अघि बढायो । त्यसकारण ५ वटा कलेजको पछि लाग्न हुँदैन । जनताले थाहा पाइसकेको कुरा छ, काठमाडौंमा मनमोहन र बाहिर बिएनसीको सम्बन्धनको विषयमा सत्तापक्षको स्वार्थ छ, र त्यसैमा विधेयकलाई अल्झाइएको छ । बिएनसीलाई सम्बन्धन दिने विषयमा म समस्या खासै देख्दिन । बिएनसीको मालिकले त्रिवि वा केयूको नै सम्बन्धन चाहिन्छ भनेर अहिलेको जस्तै पास गरायो भने छुट्टै कुरा हो । एउटा कलेका लागि दीर्घकालिन रुपमा गुणस्तरमा सम्झौता हुने र चलखेल रहिराख्ने ठाउँ छोड्न हुन्न । नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ ।
शिक्षामा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने तर्क विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उक्त कुरा उल्लेख छ । तर, यो संसद्बाट पारित प्रतिवेदनमा चाहिँ निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा छ नि ?
हो, उनीहरूलार्ई त लुट्दै जाऊ भनेर एउटा बाटो दिइएको छ । अहिलेसम्मका मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो लगानी उठाइसकेका छन् र फाइदामा चलिरहेका छन् । नोक्सानमा भएर कोही पनि वर्षौंदेखि चल्दैनन् । नोक्सानमा हो भने सरकारलाई दिन खोज्दैनथ्यो ? मनमोहनको मिलाई दिनुपर्यो, सरकारले लिनुपर्यो भन्दा मानेनन् । अब खोल्ने मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रमा खोल्नु आवश्यक नै छैन । सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । संविधानमा नेताहरू एउटा कुरा गर्ने तर व्यवहार अर्को ? तर, राम्रो कुरा के भएको छ भने सरकारले रियलाइज गरेको छ । यो नाफा कमाउने संस्था नभएर सेवामुखी हुनुपर्यो । राज्यले क्रमशः दायित्व बढाउँदै जानुपर्यो भन्ने विवेक राज्यलाई आएको छ ।
सरकारले ल्याएको चिकित्साशिक्षा विधेयकले विश्वविद्यालयको काम–कारबाहीलाई कस्तो असर परको छ ?
विश्वविद्यालयहरू त खुसी नै हुनपर्ने हो । किनभने, राजनीतिक प्रेसरका कारण हामीले सम्बन्धन दिनुपर्यो भनेर भन्दै गर्दा अब ऐनले रोकेको छ । यो सब नियतको कुरा हो । म धरानको निर्देशक हुँदा पनि काठमाडौं युनिभर्सिटीले सम्बन्धन दिनुपर्यो भनेर कुरा भएको थियो । मन्त्रीलगायत मानिसले मलाई भन्दा मैले मानिनँ र भएन । दुई पार्टीका मानिस यसमा छन् । कांग्रेसले अहिले हल्ला गर्यो भनेर हुँदैन, दोष उनीहरूको पनि छ । विश्वविद्यालयहरूलाई चित्त बुझेको छैन, तर उहाँहरूमाथि शासन गर्न विधेयक आएको होइन, उहाँहरूको शासनलाई सजिलो बनाउन ऐनमार्फत कुराहरू आएका हुन् । उहाँहरूले बुझ्दै पनि आउनुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरूलाई सजिलो भएको हुनुपर्छ ।
विधेयकमा सिटिइभिटीसम्बन्धी विवादित विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सिटिइभिटीको सन्दर्भमा यतिवेला जनशक्ति आवश्यक छैन, गुणस्तर पनि कम भयो । त्यतिवेला ३–४ हजार रूपैयाँमा सर्टिफिकेट लिएका नर्सहरू अहिले काम गर्दै छन् । त्यही भएर अब चाहिँदैन भनेर प्रस्ताव भएको थियो । तर, त्यो राख्नचाहिँ जरुरी छ । किनभने, एजुकेटेड इमप्लोइड मात्र उत्पादन गर्ने काम हुन्छ । सांसदहरूले ५ वर्षको नभनेर एक–दुई वर्ष थपेको भए पनि खास फरक पर्दैनथ्यो ।
कहिलेसम्म पढ्दै नपढेकाले उपचार गर्दै हिँड्ने, काठमाडौंमा बसेकालाई एउटा विषयमा मात्र विशेषज्ञता हासिल गरेको डाक्टर चाहियो । नेपाली जनतालाई अहेवले उपचार गरेर पुग्छ ? त्यही भएर हामीले चाहिँ पाँच वर्षको अवधि राखेर प्रस्तावित गरेका छौँ । यो ढुंगामै लेखिएको होइन, परिवर्तन पनि हुन सक्छ तर गर्दै जानुपर्यो ।
यदि ९५ प्रतिशत माग पूरा भएका हुन् भने गएर डा’साप तपाईंका माग हामीले यो–यो पूरा गर्यौं भनेर त कुरा गर्न सकिन्छ नि ! के डा. केसी अछुत हुनुभयो त ? हिजो त्यत्रो गरेर सम्झौता गर्ने, आज उहाँ अछुत हुनुभयो ? राज्य त सबैको अभिभावक हो नि ! एउटा मान्छे मर्यो त राज्यको मर्यो । सरकारलाई डा. केसी केही होइन भन्ने लाग्यो ।
मेडिकल कलेजका लागि विश्वविद्यालयका दायित्व के–के हुन्छन् ?
त्यो त धेरै हुन्छन् । एउटा त विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजका लागि लायक छन् कि छैनन्, त्यसमा बेसिक पूर्वाधार पुगेका छन् वा छैनन् हेर्नुपर्यो । दोस्रो पढाइ कुन किसिमले भइरहेको छ, परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय ध्यानमा राख्नुपर्यो । जबर्जस्ती पास गराइरहेका छन् कि भन्ने विषय हेर्नुपर्यो । भर्ना हुँदा कस्ता विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, धाँदली भएको छ कि छैन जस्ता यावत् कुराहरू छन् । मलाई लाग्छ, सबै जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने नेपालको विश्वविद्यालयले दुईवटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन सक्ने क्षमता नै छैन । एक्स्टेन्सन कलेज विराटनगरमा खोलियो । काठमाडौं विश्वविद्यायलको डाक्टर त्यहाँ पढाउन जान्छ ?
यो सबै भनेको विश्वविद्यायलका कर्मचारीहरू राजनीतिक दबाब झेलिरहेका छन्, आफ्नो जागिर जोगाउन वा अन्य बहानामा ।
डा. केसीलार्इ चिकित्सक संघदेखि सम्पूर्णकाे साथ र समर्थनमा छ । तर सरकारले यो विषयलाई सुनेको छैन । केभन्नुहुन्छ ?
एउटा सत्याग्रही नागरिकसँग सत्तासीन पार्टीका महासचिव र संसदीय दलको उपनेताको रोहबरमा बसेर हस्तक्षर हुन्छ, त्यसअघि १० घण्टा प्रधानमन्त्रीको निवासमा छलफल हुन्छ र सम्झौता गरिन्छ । अहिले सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको मात्रै होइन, कुराकानी पनि गर्न तयार छैन । राज्यबाट आमनागरिकले यही अपेक्षा गरेका हुन्छन् ? राज्य झुटो हुन मिल्छ ? सम्झौताका मुख्य–मुख्य कुरा पन्छाएर एउटा नागरिक वा विशेष किसिमको मान्छेसित कुराकानी पनि नगर्नु भनेको कस्तो व्यवहार हो ?
फर्मल वा इनफर्मल कुराकानीबाट त कुरा गर्न सकिन्छ नि ! मैले थाहा पाएसम्म इनफर्मल्ली पनि एप्रोच भएको छैन । जटिल परिस्थिति आउँदा प्रतिपक्षी संयमित नभएको भए संसद्मै मुक्कामुक्की पनि हुन्थ्यो होला । नेपालमा राणा, पञ्चायत, लोकतन्त्र, गणतन्त्र के–के देख्यौँ । कुर्सी भाँचिएको पनि हामीले देखेका हौँ । पटक–पटकको वार्ताबाट समाधान हुन्छ । यहाँ कुराकानी गरेर सरकारका मान्छेहरूको प्रतिष्ठा बड्थ्यो, घट्दैनथ्यो । त्यसकारण कुरा नगर्नु राम्रो कुरा भएन । निर्णयकर्तालाई कसले सल्लाह दिएको छ, थाहा भएन । सल्लाहकारलाई दोष दिने कुरा भएन । जिम्मेवारी अफैँमा आउँछ भनेर निर्णय गर्ने मान्छेले पनि बुझ्नुपर्यो ।
सरकारको रवैया ठिक भएन । डा. केसीलाई सरकारले भेट्नुपर्छ । डा. केसी त अहिले बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँका सहयोगीलाई भेटेर सरकारले कुरा गर्नुपर्छ । यदि ९५ प्रतिशत माग पूरा भएका हुन् भने गएर डा’साप तपाईंका माग हामीले यो–यो पूरा गर्यौं भनेर त कुरा गर्न सकिन्छ नि ! के डा. केसी अछुत हुनुभयो त ? हिजो त्यत्रो गरेर सम्झौता गर्ने, आज उहाँ अछुत हुनुभयो ? राज्य त सबैको अभिभावक हो नि ! एउटा मान्छे मर्यो त राज्यको मर्यो । सरकारलाई डा. केसी केही होइन भन्ने लाग्यो ।